Afaka mametaka ny orinasa valve fantsona - afaka mametaka ny mpanamboatra sy mpamatsy akora i Shina
Famaritana topy momba ny karazana antsipirihany: Fampidiran-dàlana an'habakabaka, Fitaovana fametrahana fiaramanidina an'habakabaka: Fonenan'ny trano fonenana: Fampahalalana momba ny vokatra CHINA: 2 Ao amin'ny tavoahangy vata fampangatsiahana AC manokatra ny valona. Miaraka amin'ny valve tombo tombo-by. Mety amin'ny R134A R22 & ​​R12. Mora ampiasaina. Maharitra ampiasaina. Fanamarihana: Azafady avelao misy hadisoana kely kely vokatry ny fandrefesana manual. Lisitry ny entana naseho ...
Topimaso ny antsipiriany haingana any amin'ny toerana niaviany: Zhejiang, China Nomera anarana: SC Modely laharana: valopy cylinder oksizenina Fampiharana: Fitaovana ankapobeny: Sobika hafa amin'ny haino aman-jery: Toerana fanatanjahan-tena mahazatra: hafa ...
Kalitao kalitao R12 R22 R134a Famenoana vatosoa afaka mametaka ny valiny
Mamerina fitaovana amidy fitaovana manokana amidy